Naya Post Nepal | आखिर के हुँदैछ?? झापामा फेरी शिक्षकद्वारा छात्रालाई यौ न दुर्ब्य बहार,(हेर्नुहोस भिडियो)
आखिर के हुँदैछ?? झापामा फेरी शिक्षकद्वारा छात्रालाई यौ न दुर्ब्य बहार,(हेर्नुहोस भिडियो)
पछिल्लो समयमा यौन दुर्ब”यबहार का घ टना दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। लेटाङ् नगरपालिका ओडा न ८ ज्यामिरेकी १२ वर्षीय बालिकाको घ ट’ना लगतै फेरी लेटाङ्ग ५ को शिक्षा विकास मा वि मा कक्षा ६ अध्यनन् गर्ने बालिकालाई शिक्षक बाटै यो न दुर्व यवहार गरेको खबर सेलाउन नपाउँदै झापामा तेस्तै घ टना घ टेको छ।
झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका ओडा न १ को इडेन् गार्डेन ए काडेमीका एक शिक्षकले आफ्नै १३ वर्षीय छात्रा माथि यौ न दुर्व्य वहार प्रयास गरेका छन्।
अङ्ग्रेजी र सामाजिक पढाउने ती श्रीमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालय झापामा राखेको छ। छात्रा जम्मा ७ कक्षा मा अध्ययन गर्ने गर्दछिन्। शिक्षक ले बालबालिका लाई राम्रो बा टो देखाउने मा उल्टै यस्तो गरिरहदा कसको चाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह ख’डा भएको छ।
काठमाडौं । गत १ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको सात म हिनामा एक हजार ३३९ जनाले शिक्षकले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) का महानिर्देशक रामराज खकु रेलले जागिरको अवधि बाँ’की छँदै राजीनामा दिने शिक्षकको सं” ख्या यो वर्ष धेरै देखिएको बताए ।
राजीनामा दिनेको संख्या बढ्नुमा स्थानीय तहहरूले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्रोत्साहन रकम मुख्य का’रण रहेको खकुरे लले बताए । सरकारले शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्था पन) कार्यविधि, २०७६ सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त कार्यविधि अनुसार विद्यालयहरुलाई शिक्षक दरब”न्दी मि लान गर्न भनिएपछि केही स्थानीय तहहरुले स्वे”च्छिक अवका श लिन चाहने शिक्षकलाई प्रो’त्साहनबा”पत निश्चित रकम दिने घो”षणा गरेका छन् । कार्यविधिमा
२०७८ चैत्र १४, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 1607 Views